तस्करीको आरोपमा प्रहरीका एसपी नै छानविनमा तानिए – YesKathmandu.com
शुक्रबार ०९, चैत २०७४
तस्करीको आरोपमा प्रहरीका एसपी नै छानविनमा तानिए
आइतबार २३, पुष २०७४
पर्सा। तस्करीको लाइन खुलाएको आरोपमा पर्साका एसपी डा.गणेश रेग्मीमाथि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन अघि बढाएको छ । तस्करी खुलाएको तथा पैसा नदिने व्यवसायीलाई दुःख दिएको उजुरी परेपछि मुख्यालयले उनलाई आइतबार छानबिनमा बोलाएको छ ।
पर्सामा घुस्याहा प्रहरीहरुलाई साथ लिएर रेग्मीले पैसा कमाउन अभियान सुरु गरेको आरोप लागेको छ । बदनाम सइ प्रमोद प्रसाद साहलाई सादा पोशाकमा परिचालन गरी पैसा उठाउँदै आएको स्रोत बताउँछ ।
साहको दरबन्दी महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरी काठमाडौँमा सरुवा भइसकेको भए पनि एसपीलाई रिझाएर उनी जिल्लामा बसेका छन् । अर्का बदनाम प्रहरी जवान राजु प्रसादलाई पनि उनले काजमा जिल्लामै रोखर असुलीमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार छप्कैया लगायत नाकाबाट बिहान ४ देखि ६ बजेको समयमा तस्करीको लाइन खुलाइएको छ । तराईका चिसो बढेकाले बिहान सडक सुनसान हुने भएकाले त्यही बेला तस्करीको लाइन खुलाइएको छ । प्रमाणहरुसहित उजुरी परेपछि उनलाई छानबिनमा बोलाइएको मुख्यालयका एक अधिकारीले बताए । एसपी रेग्मीले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको समेत नाम बेचेर पर्सामा व्यापारीहरुलाई तर्साउने गरेको उजुरी परेको छ ।
धनकुटावासीले घेराउ गरे प्रधानमन्त्री निवास
संघीय संसद्को तयारी अन्तिममा, प्रदेशसभा संसद्को टुंगो छैन
प्रचण्डलाई पचेन केपी ओलीको निम्तो, बालुवाटारमा विदाई भोज
११५ केजी लागुऔषध र पेस्तोलसहित एक पक्राउ
अख्तियारमा उपस्थिती जनाउन हतारो र उत्सुकता छः कणकमणी दिक्षित
दिल्लीमा भारतीय नेपाली लेखक संवादको आयोजना
सिंहदरबारमा प्रम प्रचण्डकै अगाडि उपरखुट्टी लगाएर बस्ने यी महिला को हुन ?
जायज मागको सडकमै विरोध हुनु विडम्वनापुर्णः बाबुराम भट्टराई
बोल्न र हिँड्न नसक्ने तर भविष्यवाणीसहितका गहिरा कुरा लेख्ने आदित्यको उपचार हुने
सप्तरीको घाउमा विराटनगरको मलम
सडक दुर्घटनामा सयभन्दा बढीको मृत्यु
निधि र कमल थापाको विवादले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सरकारबाट स्वीकृत भएन, औपचारिक भ्रमण चीनले मानेन
गोरखाबाट नारायणकाजीले गरे मतदान
कांग्रेस संसदीय दलको बैठक स्थगित भएपछि देउवा र पौडेल गुटको भेलातिर लम्किए
कम्युनिष्ट पार्टी एक हुँदा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै ठूलो तरंग :- अध्यक्ष दाहाल
भाईको निवासमा परिवारसँगै बसेर जन्मदिन मनाए पारसले
सूर्यकिरणहरुलाई मस्ती,जिल्ला सचिवलाई सास्ती
रोजे जति मन्त्रालय नपाए पछि सभापति देउवासँग रामचन्द्र पौडेल ‘फायर’,
नेविसंघ मार्फत कांग्रेसका दुई गुटको राष्ट्रिय सभा र त्रिचन्द्रबाट वार
अल्कोहल जस्ले कसरी उजाड बनाइरहेछ म जस्ता ‘बाउ’हरुको घर परिवार ?
ठूलो दुर्घटनाबाट बच्यो यति एयरलाइन्सको जहाज
प्रचण्डलाई फकाउनेदेखि टीआरसीको मुद्दा देखाएर तर्साउनेसम्मको रणनीतिमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन